आमा बन्नु कि टेलिभिजन पत्रकार? यो प्रश्न अरुका लागि सामान्यजस्तो लाग्ला, तर टेलिभिजन पत्रकारितामा संलग्न महिलाका लागि अति नै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रुपमा रहेको विषय हो । नेपालमा श्रव्यदृश्य पत्रकारितामा प्रवेश गरेका कतिपय महिलालाई अहिले यही सवालले निकै चिमोटिरहेको पनि छ ।
! पहिलोलाई नछान्दा प्रकृतिप्रति अन्याय हुने र दोश्रोलाई हेक्कामा नराख्दा पर्दाको गरिमा हराउने!
नेपालमा टेलिभिजन संञ्चार क्षेत्रको विकाससंगै यसमा महिलाको सहभागिता बढेको र भूमिका पनि परिवर्तन भएका सन्दर्भमा उक्त प्रश्न झन गंभीर बन्न गएको छ । तर त्यस क्रममा महिला हुनुको कारणले विविध संचार कार्यमा तिनले अनुभव गर्नु परेको कथा र व्यथा भने ओझेलमा परेको पाइन्छ ।
विशेष गरी पत्रकारिताको चुनौती त्यसमा पनि टेलिभिजनको सजधज दृश्यताको हांकले महिलालाई पिरोलिरहेको पाइन्छ । व्यवसायिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने दिशामा महिलालाई साह्रै अप्ठेरो पर्ने एक विषय हो : गर्भधारणको विषयमा निर्णय लिनु । गर्भसंग समाज आबद्ध छ, त्यो विना यो चल्नै सक्दैन तर त्यसकै कारण हुने स्वाभाविक शारीरिक परिवर्तन टेलिभिजन क्यामेरालाई नपच्ने ! कस्तो विडम्बना !गर्भवती महिलाका लागि टेलिभिजन पत्रकारिता संभव नै छैन भने हुन्छ ।
त्यस पछि उनीहरुको मन मस्तीष्कमा अनेकौं प्रश्न उभिन्छन् । के गर्भधारण पश्चात् म टिभी मा समाचार बाचन गर्न पाउँछु ? साँच्चै गर्भवती अवस्थामा जूलूस, बन्ध वा जात्राको रिर्पोटिङ र छाँयांकन गर्न सक्छु ? शिशुको जन्म पश्चात फर्कि आउँदा के मेरो कार्यालयमा आफ्नो स्थान सुरक्षित रहला ?
तर महिलाले आफू आमा बन्न चाहेको खण्डमा मात्र आमा बन्ने भन्ने सूचनालाई आम जनमानसमा सञ्चार माध्यमबाट पु-याउने परिवर्तनका संवाहक संञ्चार क्षेत्रका महिलाहरु स्वयमले यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छन् त ?
एकातिर यस किसिमको सामाजिक परिवेश त छँदैछ अर्कोतिर महिलाहरुलाई आमा बने पछिको जिम्मेवारीको बोध पनि छ । एउटा शिशुलाई यस धर्तीमा ल्याउने उनको प्रमुख भुमिका भएकोले सचेत महिलाहरुले सोच्न थालेका छन्, मैले मेरो शिशुलाई शुरक्षित वर्तमान र भविष्य दिन सक्ने हो कि होइन ? मैले मेरो शिशुलाई संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ र समय दिन सक्नुपर्छ । यदि यि कुरा दिन नसक्ने हो भने रहरैको लागि आमा बन्ने, कसैलाई बाजे, बाजै वा श्रीमानलाई बुबा बनाउनको लागि मात्र आमा बन्नुको कुनै अर्थ छैन ।
अहिलेको देशको समग्र अवस्थाले पनि आमा बन्ने चाहनामा नैराश्यता आएको देखिन्छ । बन्द र हड्तालले ल्याएको शैक्षिक क्षेत्रको अन्योलता, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक र आर्थिक खस्कन्दो अवस्था!